Wararka - Olombikada Jiilaalka ee Beijing “kaalay”
Ciyaaraha Olombikada Jiilaalka ee Beijing “kaalay”
U qaado Beijing Zhangjiakou waddo tareen oo xawaare sare ku socda si aad u booqato "magaalada cusub ee barafka iyo barafka" Aagga tartanka Zhangjiakou wuxuu ku yaal Degmada Chongli, Magaalada Zhangjiakou, Gobolka Hebei. Galabnimadii 19, Tani waa rugta tareenka xawaaraha sare ee adduunka ugu horreeya ee toos u aada Ciyaaraha Olombikada ..
Saldhigga Taizicheng wuxuu leeyahay saddex meelood iyo afar khadadka imaatinka iyo bixitaanka. Waqtigan xaadirka ah, mugga gaarsiinta ugu sarreysa maalin kasta wuxuu gaari karaa in ka badan 4000 qof. dhismaha wadada tareenka xawaaraha sare ku socda ee Beijing Zhangjiakou waxaa la bilaabay bishii Diseembar 2015 waxaana la bilaabay hawlgalkii Diisambar 30, 2019. Furitaankeeda iyo hawlgalkeeduba waxay muujiyeen horumar cusub oo xagga dhismaha ah oo lagu taageerayo dhismaha Ciyaaraha Olombikada Jiilaalka. Kadib furitaanka tareenka xawaaraha sare ku socda ee Beijing Zhangjiakou, goobta ugu weyn ee Ciyaaraha Olombikada Jiilaalka laga bilaabo Beijing ilaa Prince city ayaa hal saac gudahood lagu gali karaa.
"Giraan jaad ah" iyo "baraf Ruyi"
Aagga tartanka Zhangjiakou waxaa loo yaqaan "aagga ugu fiican ee barafka lagu ciyaaro ee Waqooyiga Shiinaha". Xoghayaha guud Xi Jinping ayaa markaa yimid xarunta boodada barafka. Tani waa goobta tartanka oo leh tirada ugu badan ee dhismaha iyo dhibaatada farsamada ugu sareysa ee aagga tartanka Zhangjiakou. Inta lagu jiro tartanka, wuxuu qaban doonaa dhammaan tartamada barafka iyo dhacdooyinka Waqooyiga Yurub, isagoo soo saari doona 8 billadood oo dahab ah.
Xarunta barafka ee qaranka ayaa laga dhisay dooxooyinka dhexdooda. Naqshad dhismeedka ugu weyn waxaa dhiirrigeliya quruxda Shiinaha ee soo jireenka ah "Ruyi", oo loogu magac daray "xueruyi". Laba waddo ayaa laga dhisay xarunta lagu boodo barafka, taas oo dhaaftay aqbalaadda Xiriirka Caalamiga ah ee Barafkii bishii Nofeembar 2020, oo isu rogtay "barafka Ruyi" ee ku tiirsan buurta
“Xueruyi” wuxuu adeegsadaa darbiga daahyada muraayadda qalooca, kaas oo aad ku indha indheyn karto wadada barafka. Xarunta qaran ee lagu boodboodo, Xi Jinping wuxuu booqday tacsida cayaartoyda, tababarayaasha iyo wixii la mid ah. Xu Gaohang, oo ah hogaamiyaha kooxda tababbarka boodka barafka ayaa u sharaxay xoghayaha guud isla maalintaas. Waxay u sheegtay "indhaha wararka wararka ee hadda jira" in xaaladda faafa ay yareysay fursadaha tartanka oo kaliya ay "ku tababbari karto xirfadaha gudaha albaabada u xiran". Tan iyo dhammaadkii sanadkii hore, xubnaha kooxdu waxay xoogga saareen tababarka tunnelka, waxayna dareemi karaan mowqifka seddex xagallo qulqulka hawada oo kala duwan, taas oo ka hortageysa dhibaatada waqtiga yar ee waqtiga tababarka iyo booska tababarka, waxayna si weyn u wanaajineysaa saameynta tababarka. .
Tababbarka ku boodka barafka ee 'Ski bood' Magaalada Zhangjiakou, xarunta laga boodo isboortiga ee waddanka, xarunta isboortiga ee waddanka oo dhan laga gudbo iyo xarunta qaran ee biathlon ayaa ah kooxdii hore ee garoonka caanka ah. Tani waa guruub cusub oo guruub ah garoonka Ciyaaraha Olombikada. Goobaha waxaa kuxiran sagxad wareeg ah oo wareegaya “giraanta jaad giraanta” oo celcelis ahaan dhererkeedu yahay ilaa 8 mitir. Xarunta qaranka ee biathlon waa garoonkii Olombikada ee ugu dambeeyay xilliga qaboobaha oo uu kormeeray xoghayaha guud maalintaas.